FAMPANDROSOANA : Efa tsara toerana eo imason’izao tontolo izao i Madagasikara
Na mbola voasokajy ho isan’ireo firenena an-dalam-pandrosoana aza i Madagasikara dia efa mihatsara kosa ny endriky ny fandrosoana ara-toekareny eo anatrehan’izao tontolo izao. Miaiky izany ireo mpamatsy vola izay vonona ny hanamafy hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny firenena malagasy. 10 février 2020
Anisany fanamby goavana apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny hanatratra ny fahatarana ara-pandrosoan’i Madagasikara tao anatin’izay 60 taona nahazoana ny fahaleovan-tena izay. Maro ireo vinan’asa apetraky ny Filoha Andry Rajoelina izay iarahany manatontosa amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta.
Tao anatin’izay herintaona katroka nandraisan’ny Filoha ny fitantanana ny firenena izay dia efa azo lazaina ho hita mivaingana ireo ezaka nataony ho fampandrosoana an’i Madagasikara indrindra eo amin’ny lafiny ara-toe-karena. Vao tsy ela akory izay no nanamafy ny firenena Amerikanina sy ny firenena Rosianina tamin’ny alalan’ireo masoivohony miasa sy monina eto Madagasikara fa mahafa-po ny fiaraha-miasa amin’ny Filoha Malagasy ankehitriny. Vonona hatrany izy ireo hitondra fanampiana sy ny tolo-tanana ho an’i Madagasikara. Nanamafy izany ihany koa ny Minisitry ny vola sy ny fitantanam-bola, Randriamandrato Richard.
Ity farany izay nilaza fa efa manomboka misandratra eo anatrehan’izao tontolo izao i Madagasikara eo amin’ny lafiny ara-toekarena. Porofon’izany, hoy izy, ny tsy fihambahamban’ireo mpamatsy vola vahiny hampiasa ny volany eto amintsika. Anisan’izany ny Banky iraisam-pirenena izay nitondra famatsiam-bola hanatanterahana tetikasa goavana maro eto an-toerana, tafiditra ao anatin’izany ireo lalam-pirenena, ny sekoly sy ny hopitaly.
Ity farany izay nilaza fa tsy azo sokajiana ho firenena marefo intsony i Madagasikara raha ny tanjaka ara-toe-karena no asian-teny. Tahaka izany ihany koa ny banky Afrikanina ho an’ny fampandrosoana izay nanome tanana ho amin’ny famatsiana herinatra, ary banky Arabo ho an’ireo sehatr’asa maro hafa. « Efa manomboka izany fisandratan’i Madagasikara izany amin’ny lafiny toe-karena. Ohatra kely omeko anareo izao ny Banky iraisam-pirenena dia efa milaza tamin’ny fomba ofisialy fa tsy anisan’ireo firenena mareforefo intsony i Madagasikara. Heveriko fa zava-dehive izany satria misy ireo lalam-bola vaovao sy famatsiam-bola vaovao izay azontsika eo anivon’ny Banky iraisam-pirenena ary ihany koa eo anivon’ ireo banky hafa toy ny banky Afrikanina ho an’ny fampandrosoana na ny banky Arabo”, hoy ny Minisitra Randriamandrato Richard.
Hitombo ireo mpamatsy vola ho avy
Manaporofo ihany koa izany fa fanjakana tsara tantana sy azo itokisana no mijoro eto Madagasikara. Ankoatr’izay dia nambaran’ny Minisitra fa tsy mitsaha-miakatra ny harin-karena faobe ho an’i Madagasikara. Tratrarina ny hampiakatra izany hatrany amin’ny 5, 5% amin’ity taona ity ary hatramin’ny 7% kosa izany hatramin’ny taona 2023. Heverina, hoy izy, fa hitombo sy hiakatra tahaka izany ihany koa ny famatsiam-bola ho azon’i Madagasikara avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka. “Azo antenaina tokoa fa manomboka amin’ity taona ity sy amin’ny taona manaraka dia hisy ny famatsiam-bola bebe kokoa noho ny teo aloha. Vaovao vao voaraiko haingana ihany koa, misy ivon-toerana frantsay izay efa nanatsara ihany koa ny naoty ho an’i Madagasikara. Ankehitriny i Madagasikara dia anisan’ireo firenena ao anatin’ny sokajy C raha tao amin’ny sokajy D izy teo aloha. Midika izany fa efa mihatsara hatrany hatrany sy miandalana ny fahitan’izao tontolo izao ny toe-karen’i Madagasikara. Manomboka izao ka hatramin’ny taona 2023, tsy maintsy mahatratra 7% ny harin-karena faobe, amin’ity taona ity, manenjika 5,5% isika. Tsy maintsy mitovy ny fandrosoan’ny isam-paritra », hoy hatrany ny Minisitra.
Nandiso ny vaovao tsy marina
Lahatsoratra an-gazety iray no namoaka fa manomboka izao dia orinasa vahiny no hisahana ny fandoavana ny karaman’ireo mpiasam-panjakana. Mahatsiaro tena ho voasoketa ao anatin’ izany ny Minisitry ny vola sy ny fitantanam-bola izay tompon’ andraikitra voalohany misahana izany. Efa nisy fanambaràna navoakan’ny teo anivon’ny Minisitra nandiso an’io vaovao tsy marina nivoaka io, saingy mbola nanamafy mivantana tamin’ny feo hentitra ihany koa ny Minisitra. Tsy mitombina izany, hoy izy, ary tsy azo eritreretina velively. “Hitako ireo resaka maro samihafa. Ny tenanay moa somary voalotoloto ihany amin’ ilay hoe, misy fifanarahana tahaka izao na tahaka izao handaminana ny eo anivon’ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny tahirim-bolam-panjakana. Tsia tompoko, tsy misy izany orinasa vahiny handoa ny karaman’ny mpiasam-panjakana izany. Tsy mitombina izany”, hoy ny Minisitra. Araka izany dia tsy misy ny fiovana fa tahaka ny fomba fiasa efa nahazatra hatramin’izay hatrany no apetraky ny Minisitera eo amin’ny fitantanana sy fitsinjarana ny volam-panjakana.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (128) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (91) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (84) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (76) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (75) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (66) 22 mai 2020